Version 0.6.7 – Whatâ € ™ ny manaraka?
Desambra 18, 2010 amin'ny tolotra 23 Comments
Omaly dia efa namoaka dikan- 0.6.7. Ity dia ahitana dikan-tsy ampy taona vitsivitsy fixes, na ny fahafahana bebe kokoa handika teny rehefa Google tsy mamantatra ny teny loharano tsara, ary ny fahafahana tafiditra mivantana rohy ho voasakantsakan'ny rakitra (ireo no mahatonga ny 301 redirect hitranga).
Na izany aza no zava-dehibe kokoa dia ny hoe isika afaka ihany ny fanadiovana ny dingana lehibe, ary nametraka ny Gears mihetsika feno ho an'ny lehibe manaraka dikan-Transposh – izay ho 0.7. Ny fifantohana izany dikan-ho lehibe ho fanatsarana ny mpandika teny frontend interface tsara, ary efa nametraka ny fepetra takiana ho an'ny aterineto izany eo amin'ny fampandrosoana toerana amin'ny http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. Izay rehetra te-hanova ny manaraka dikan-ho voaray tsara ny hanova sy hevitra tamin'izany Wiki na hamorona pejy tapakila ho antsika. Dia hamerina hijery fangatahana tsirairay ary miezaka mba hifanaraka eo an-fandaharam-potoana.
Ao amin'ny vaovao hafa, tianay ny hisaotra Colnect, ny vaovao hisahana ny anjara vps vaovao ho an'ny Transposh izay antenaina hanao ny toerana somary mandeha haingana kokoa. Antsika ihany koa niezaka nampiasa cloudflare mba hanatsarana ny fanompoantsika, na izany aza isika dia manana vokatra mifangaro amin'ny izay, izany raha toa ianao ka manana olana fidirana toerana ity, Mba Avelao re Izahay mahalala.
Farany ny fandaharam-potoana, alpha dika ny plugin ny mpamaham-bolongana eo amin'ny asa, raha manana toerana eo amin'ny mpamaham-bolongana sy ny te-hanampy fandikan-teny ho azy, mifandraisa aminay fotsiny.
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: 0.7, mpitoraka bilaogy, dikanteny google, lehibe, tsy ampy taona, fanafahana, Trac, WordPress plugin
Ataovy “Trac” ny fisehoan-javatra
Desambra 11, 2009 amin'ny tolotra Leave a Comment
Salama ny ao,
Ny fomba tsara indrindra hampandrosoana dia miaraka amin'ny fanampian'ny ny fiaraha-monina, ary tianay ny hamela ny rehetra hahafantatra ny zava-mitranga, ary inona no fomba tsara indrindra ny manao fikarohana momba ny zavatra ataontsika.
Raha toa ianao ka mpampiasa, ary te-hahazo fanohanana sy mahazo haingana nampahafantarina momba ny zava-nitranga vaovao, misalasala hanaraka antsika amin'ny amin'ny twitter.
Raha te ho anjara bebe kokoa eo amin'ny fiaraha-monina, Te hanampy ny hafa, ary hirehareha ny amin'ny toerana mampiasa transposh, ankehitriny kosa dia misy pejy Facebook.
Raha te-hahafantatra izay ny mpandraharaha manao, mahalala ny ho avy izy ireo endri-javatra alohan'ny afaka ary amin'ny ankapobeny ny hiaina eo an-tsisin'ny, manaraka ny Trac toerana Trac RSS.
Raha mba sitrakao fotsiny mantsy hanaraka ny filazana momba izany toerana, ny RSS famantarana (na eto ambany, na any amin'ny adiresy navigateur tsipika) ny namanao. Dia hahazo izany fahana amin'ny fiteny amin'izao fotoana izao mampiasa.
Comments dia nanaiky foana koa (ary miezaka mba hiverenana haingana araka izay azo atao). Raha toa ka manana soso-kevitra hafa / hevitra / torohevitra / fisainana anaram-boninahitra lahatsoratra – dia aoka isika mahalala fotsiny.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: Facebook, RSS, ara-tsosialy, Trac, amin'ny twitter
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [77b28fe]: Esory manelingelina faha-3 antoko fampahatsiahivana avy amin'ny mpitantana ny pejy, ilaina ... Aogositra 10, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [6bbf7e2]: Update fandikan-teny raki-daza Aogositra 4, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [f039333]: bugbugpot Aogositra 4, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [0688c7e]: Language anarana, tsy fehezan-dalàna Aogositra 3, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [7a04ae4]: Avelao fanesorana ny sivana amin'ny backend tonian-dahatsoratra Aogositra 3, 2018